FBS ဘောလုံးပွဲ ခရီးစဉ် ၂ ပြိုင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲ!
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဘောလုံးပွဲခရီးစဉ် ဒုတိယပိုင်းပြိုင်ပွဲ ပြီးဆုံးသွားပါပြီ! အံ့သြဖွယ်ရာပါပဲ!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနိုင်ရသူကံထူးရှင်၏ အကောင့်နံပါတ်ကို ကြေငြာပေးဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ တကယ်တော့ FBS ဘောလုံးဝါသနာရှင်များအသင်းကြီးတစ်ခုလုပ်လို့ရအောင် အနိုင်ရသူများစွာရှိနေတာပါ!
ယခုနှစ်၏ အကြီးမားဆုံးဘောလုံး ပြိုင်ပွဲ (သို့) ပြောရရင် - လေးနှစ်မှတစ်ကြိမ် အကြီးဆုံးဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီး 😊နီးကပ်နေပါပြီ။ ရုရှားကိုသွားလည်ပြီး၊ ကြီးမားတဲ့ ကမ္ဘာ့-နာမည်ကြီး အားကစားကွင်းကြီးထဲက ပရိတ်သတ်တွေထဲက တစ်ယောက်အဖြစ် စိတ်ကူးကြည့်လိုက်စမ်းပါ..... သင်ကြားလား? ……. Ole Oleee Ole Ole!
FBS အဖွဲ့တစ်ခုလုံးက ပြိုင်ပွဲကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပါဝင်ကြတဲ့အတွက် အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပြီး၊ ကံထူးရှင်များအတွက်လည်း ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ပျော်စရာအားလုံးကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ သတင်းပေးသွားပါမယ်။ ဒါကြောင့် ဆက်နားထောင်ပြီး၊ ကျွန်တော်တို့လူမှုကွန်ယက်များကိုလည်း လာရောက်ကြည့်ရှုဖို့မမေ့ပါနဲ့!